Madaxweyne Gaas oo xariga ka Jaray Bangi Bosaaso laga Hirgaliyay – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas oo xariga ka Jaray Bangi Bosaaso laga Hirgaliyay
Janaayo 9, 2016 10:00 b 0
Sabti, Janaayo 09, 2016 (Daljir) —Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 09-Jan-16 xarigga ka jaraya Bangi Caalami ah oo lagu magcaabo CAC International Bank, bangigaas oo ah mid laga heleyo dhammaan adeegyada ay bixiyaan bangiyada Caalamku.
Munaasibadda xarig kajaridda Bangiga ayaa waxaa goob joog ka ahaa Madaxweyne ku-xigeenka Dawladda Puntland Eng Cabdixakiima Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey, Ganacsato, Maamulka Bangiga iyo dadweyne kale.
Madaxweynaha Dawladda Punland ayaa ku tilmaamay bangigan mid wax-badan ka bedeli kara horumarka guud ee Puntland kana qayb qaadan kara horumarka ganacsi iyo kan kaabayaasha dhaqaalaha Puntland isla markaasna laga filayo fikrado cusub iyo ganacsiyo cusub oo waddanka looga hirgelin karo maadaama uu yahay Bangigii ugu horeeyey ee Caalami ah oo Puntland laga hirgeliyo.
Madaxweynaha ayaa u rayey Bangiga CAC iyo Bangiyada kale ee Puntland ka hawl gala inay xiriir wanaagsan yeeshaan iskana kaashadaan kaqayb qaadashada horumarka baaxadda leh ee kasocda Puntland.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xadhigga kajaray Xero cusub oo magaalada Boosaaso looga dhisay qaxooti isugu jira soomaali iyo Yamaniyiin, kuwaas oo kasoo qaxay dagaaladii dhowaan ka dhacay waddanka aynu deriska nahay ee Yaman.
Munaasiba xarigga looga jarayey ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweyne ku-xigeenka Dawladda Puntland Eng Cabdixakiima Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey, Danjiraha Dalka Yamane e Soomaaliya, Wasiirka Arrimaha gudaha Puntland, Maaulka Gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso, Masuuliyiin kale iyo qaxootigii la dejiyey xeradaasi.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Dr.Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in maanta uu yimaado xeradan si’uu u ogaado xaaladda dhabta ah ee ay kusugan yihiin dadka ku dhaqan xerada maadaama ay magan u yihiin Dawladda Puntland.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale umadda soomaaliyeed meelkasta oo ay joogto ugu baaqay in ay il gaar ah ku hayaan dadka nugulka ah oo soo dhibaatooday nabadgelyadooda iyo noloshoodaba, sidoo kalena hay’adaha mucaawinooyinka loogu soo dhiibo dadkan tabaalaysan ayuu Madaxweynuhu ugu baaqay in ay soo gaarsiiyaan maadaama ay maanta ugu baahi badan yihiin xaqna u leeyihiin wixii loogu talo galay in lasoo gaarsiiyo.
DHAGAYSO:Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo wariye Geeddi
Madaxda Somalia oo la Kulmay Ardayda Jaamacadaha Puntland